Dhaxan madow: qeexitaan, astaamo iyo waxyeelooyin. Ilaali dalagaaga | Saadaasha Shabakadda
Marka a mowjado qabow, waxaa laga yaabaa inay la timaaddo astaamo gaar ah sida qoyaan sarreeya ama hooseeya. Intaas waxaa sii dheer, waxaa laga yaabaa ama laga yaabaa inay lasocoto roob xoog leh. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonnaa arrimaha ku saabsan dhaxan madow. Waa ifafaale ku soo wajahan dalkeena mowjadaha qabow ee haatan jira iyo cufnaanta polarka ee soo galay jasiiradda.
Haddii aad waligaa maqashay magaca dhaxan madow oo aadan hubin waxa ay tahay, halkan ku sii aqri aqrinta maqaalkan, maxaa yeelay wax walba waan kuu sheegeynaa.
1 Waa maxay dhaxan?
1.1 Dhaxan cad
1.2 Dhaxan madow
2 Dhaawaca dhaxanta madow
3 Sida loo ilaaliyo dalagga
Waa maxay dhaxan?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan u caddayno kuwa aan weli garan, waa maxay dhaxan tahay. Waa hoos udhac kuleylka ka hooseeya 0 ° C. Marka heerkulbeegga uu hoos uga dhaco heerkulkaas iyo cadaadiska cimilada ee aan ku leenahay meeraheenna, biyuhu waxay noqdaan kuwo adag oo sameysma kristantarno baraf laba-geesood leh oo isu taga si ay u noqdaan dhaxan.
Mararka qaar muhiim maahan in hoos loo dhigo heerkulka ka hooseeya 0 ° C si uu dhaxan u jiro, laakiin waxaa jira dhowr nooc oo aan hoos ku sharixi doonno.
Waa dhaxantaas oo heerkulkeedu ka hooseeyo 0 ° C oo ku soo dhowaanaya ama u dhiganta heerkulka dhibic dharab. Markay tani dhacdo iyo heerkulku wuxuu ku soo dhowaadaa barta dharabka, biyuhu waxay billaabaan inay isku uruursadaan. Guud ahaan, haddii heerkulku ka sarreeyo 0 ° C, sayax ayaa ku dhaca oo ku dhaca baabuurta, dhirta, waddooyinka, iwm. Waa markaas kadib markii aan arki karno biyaha dareeraha ah ee lagu shubay meelahaas. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo yaqaan 'dhaxan cad', markay tahay heerkul ka hooseeya 0 ° C, sayaxa guud wuxuu isu beddelaa dhaxan.
Hadda waxaan u jeednaa xirmada su'aasha ee qodobkan. Nooca labaad ee dhaxan waa dhaxan madow. Waxay ka kooban tahay dhaxan ay ku jirto heerkulka ayaa ka hooseeya 0 ° C laakiin dhaxan ma sameysmo. Sababtuna waa iyadoo hawadu aad u qalalan tahay oo haba yaraatee aan qoyaan lahayn. Maaddaama aysan lahayn wax qoyaan ah, heerkulku uma dhigmo barta dharabka, sidaa darteed ma jiraan wax uumi biyo ah, samaynta dhaxan aad uga yar.
Qabowgan madow badanaa waxaa weheliya cirka daruuro gebi ahaanba leh ama xoogaa buuq ah oo ka jira lakabyada hoose ee jawiga.
Dhaawaca dhaxanta madow
Waxaad u maleyn kartaa in xaqiiqda ah in dhaxan uusan keenin dhaxan ay aad uga wanaagsan tahay. Si kastaba ha noqotee, way ka cabsi badan tahay dhaxan cad maxaa yeelay waxay si weyn u waxyeeleysaa dalagyada. Hawada qalalan ee noocan ah dhaxan ay ka kooban tahay waxay si toos ah u weerareysaa dhismooyinka gudaha ee dalagyada waxayna sababtaa in kristantiyada barafka ay ka dhex sameysmaan dhirta dhexdeeda Marka barafkani u samaysan yahay qaab tilmaaman, jeexjeexa unugyada gudaha ee geedka oo xuubka gudahana wuu engejiyaa, taasoo keenta dhimashada geedka.
Waxaa looyaqaanaa dhaxan madow maxaa yeelay isha qaawan waxay arki kartaa sida dhirtu u qudhunto uguna rogto madow. Haddii waxyeeladu aad u xoogan tahay oo ay saameyso qaybaha qaboojinta ee geedka, way dhiman doontaa. Mararka qaarkood haddii aan ilaalino iyaga oo kugu filan ama dhaxanku aanu sii dheerayn, way badbaadi karaan.
"Warka wanaagsan" ayaa ah in uu baraf yahay kaliya waxay ku dhacdaa dhirta aan weligood cagaaranayn. Taasi waa, markay ifafaaladani dhacdo, waxay weeraraysaa dhirtaas ay xaaladdooda daaqi firfircoon tahay. Dhirta dhirtu ka baxdo iyo dhirtuba way ka takhalusaan cawaaqibyadan sababtoo ah si dhib ah kuma laha dhaqdhaqaaqyada gacanta.
Qabowgan lama filan karo waqti hore, sidaa darteed u diyaar garowgooda waa mid aad u adag. Waxa kaliya ee la sameyn karo ayaa ah in la isku dayo in dalagyada laga ilaaliyo cawaaqib xumada soo socota.
Sida loo ilaaliyo dalagga
Maaddaama dhirta ku jirta xaalad daaqsimeedka firfircoon ay yihiin kuwa ugu waxyeellada badan, waa inaan sameynaa wax aan uga ilaalino dhaawaca. Dhirta ku jirta dheryaha ama aan ku leenahay jardiinada, way fududahay in laga ilaaliyo. Kaliya waa inaad guriga dhex dhigtaa oo aad dhigtaa meel dhalaalaya. Haddii aan dhigno balbalo derbiga ka soo horjeeda, iyagana waa la ilaalin doonaa.
Daryeelka dhirta aan dheriga ku jirin ayaa ugu dhib badan. Si kastaba ha noqotee, waxaan halkan ku siineynaa xoogaa tilmaamo ah oo looga hortagayo dhaxan madow inuu baabi'iyo dhirteenna.
Haddii aan ku leenahay geed ama geed gaaban beerta lagu beeray banaanka, waxaan ku dabooli karnaa dhulka lakab qashin ah. Tani waxay u oggolaaneysaa nooc carqalad ah oo la abuuro oo ka ilaaliya qabowga inuu galo dhulka hoostiisa. Sidan oo kale, waxaan uga hortageynaa biyaha ku yaal daloolada dhirta inay dhaxanto oo ay gudaha ka baabba'do.
Waan awoodnaa dhig nidaam waraab oo mas'uul ka ah in dhirta lagu buufiyo xoogaa biyo ah. Sidan oo kale, haddii heerkulku ka hooseeyo 0 ° C, waxaan heli doonnaa lakab baraf ah oo ka samaysma dusha unugyada dhirta oo aan u adeegno sidii insulator. Barafku wuxuu ilaaliyaa unugyada dhirta.
Iska ilaali inaad si xad dhaaf ah u falato dhulka bilaha jiilaalka. Qabowgan ayaa dhaca xilliga qaboobaha. Haddii aynaan falan, waxaan u oggolaaneynaa xeeb adag inay ka sameysmaan dhulka dushiisa kaasoo ka dhigaya dhulka hoostiisa qabowga.
Sidoo kale waa noqon karaa dhig taageerooyinka si ay hawada u dhaqaajiyaan iyo in hoos u dhac aad u xoogan oo heer kulka uusan sababin.
Habka ugu isticmaalka badan ayaa ah ilaalinta dalagga oo leh caag ama jawaano. Ujeeddadu waa in dhirta lagu daboolo caag ama jawaano iyo baaldi biyo ah gudaha. Tan waxaa loo sameeyaa maxaa yeelay biyaha ayaa lumiya oo kuleyl badan ka hela hab ka gaabiya hawo. Tani waa sida ay ugu shaqeyso iyada oo ay tahay jaangooyaha kuleylka ee bey'addan yar, tan iyo markii ay biyuhu ku ururaan caagga, waxay soo deyn doonaan kuleylka qarsoon.
Waxaan rajaynayaa in talooyinkaan aad ku dhaafi karto dhaxan madow adigoon wax kalgacal ah lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dhaxan madow